UNWTO General Assembly ugbu a na Madrid: Zurab Pololikashvili bụ onye amamihe. Saudi Arabia ọ ga-emeghachi omume?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » UNWTO General Assembly ugbu a na Madrid: Zurab Pololikashvili bụ onye amamihe. Saudi Arabia ọ ga-emeghachi omume?
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvili
Ndị na-ege ntị maka Mgbakọ General UNWTO na-abịanụ gbanwere site na ndị ozi gaa na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe ngosi taa, mgbe ebe a gbanwere site na Morocco gaa Spain.
Nke a bụ ozi ọma maka odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili, mana akụkọ ọjọọ maka njem nlegharị anya ụwa.
Saudi Arabia enwere ike inye aka?
Dị ka buru amụma site eTurboNews na ndị nọ n'ime ime, taa UNWTO mere ya onye ọrụ.
Mgbakọ General zubere maka Marrakesh, Morocco site na Nọvemba 30 ruo Disemba 02 ga -adị na mpaghara enyi karịa, Madrid, Spain
Onye odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili jiri ikike ya na Madrid maara nke ọma mee ihe. Inwe Mgbakọ General na mberede na Madrid ga -emechi ntuli aka ntuli aka ya, ọ ga -enwe olile anya.
Kemgbe Zurab Pololikashvili si Georgia were onye isi oche World Tourism Organisation na Jenụwarị 1, 2018, nzukọ a ghọrọ onye iro mgbasa ozi. UNWTO tụgharịrị site na nzukọ mepere emepe mepere emepe ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe nzuzo, ihe nzuzo na ịgbachi nkịtị. Egwu maka ọrụ chịrị n'isi ụlọ ọrụ UNWTO dị na Madrid, Spain.
N'ịnagide nnukwu nsogbu ụwa a chere ihu na akụkọ ihe mere eme nke oge a, UNWTO anaghị anabata ozi, ọ naghị arụ ọrụ, belụsọ mgbe ọ baara onye odeakwụkwọ ukwu uru n'onwe ya.
COVID-19 buru oke ibu, UNWTO gbapụrụ n'ịkwalite mmanya-njem.
Ndị odeakụkọ nọ na-eche na mpụga ụlọ ọrụ UNWTO na Market Travel World na 2018 na 2019 naanị ka a gwa ha na odeakwụkwọ ukwu enweghị ike ịga nnọkọ mgbasa ozi nke ya.
Na 2019 UN Climate Change Conference COP 2019 Madrid, odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO nwere mmasị na ohere foto ya na ndị isi obodo mana ọ gbapụrụ ebe a na-eme ọsọ ọsọ iji zere ajụjụ mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ itinye aka na mmemme ahụ.
Na ọgbakọ ọgbakọ mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke 2021 na-abịanụ COP 2021 na Glasgow mgbe ọnwa a gasịrị, onye odeakwụkwọ ukwu ga-egosipụta ihu. Ọ kwesịrị ime ka mba dị iche iche kwenye ọzọ ka ọ bụrụ odeakwụkwọ ukwu na ọgbakọ ọgbakọ.
Na ahịa njem mba ụwa na-abịanụ (WTM) 2021, onye odeakwụkwọ ukwu ga-aga nnọkọ ọgbakọ. Nke a bụ maka ọdịmma nke ya naanị izu ole na ole tupu nkwenye ya. Ọ na -eche ịhụ ma ọ ga -eche ndị nta akụkọ ihu na nnọkọ mgbasa ozi. Enwetabeghị ụdị oku a eTurboNews ma.
Ọ kwesịrị ka ọ pụta ihe na -enye aka. Ya mere, ọ na -agbasi mbọ ike ka PR guzobe nkwupụta COP 2021.
Nkwughachi ya na Mgbakọ General na Nọvemba mgbe UNWTO Executive Council mechara họpụta ya na Jenụwarị ka ọ dịịrị Zurab mfe.
Inwe Mgbakọ General na Madrid bụ ihe Zurab chọrọ oge niile. Ekwesịrị ikele Pololikashvili dị ka onye ọkaibe na -eme mgbanwe n'ọchịchị.
Enwere ike ibu amụma n'ụzọ dị mfe na mgbe ọ nwetasịrị nkwenye nkwenye na mgbakọ na Madrid, azụmahịa UNWTO ga -alaghachiri ya nkịtị.
Nkịtị pụtara ịgbachi nkịtị, enweghị njikọ aka bara uru, ọ nweghị onye ndu dị mkpa.
Ọ pụtara izere imekọ ihe ọnụ na WTTC na nnukwu ụlọ ọrụ nkeonwe, na-eleghara okwu COVID-19 anya, na ilekwasị anya na ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ya ịghọ praịm minista Georgia.
Taa Gọọmentị Morocco gbataara ya ọsọ enyemaka n'ịkagbu Nzukọ Ezumezu na Marrakesh.
Nke a buru amụma site na eTurboNews na isi mmalite ndị ama ama ruo oge ụfọdụ.
Rịba ama Verbale gafere mba ndị otu UNWTO taa (Ọktọba 23,2021)
Isi ụlọ ọrụ nke World Tourism Organisation (UNWTO) na -ewetara onye otu nzukọ ihe otuto ya ma nwee nsọpụrụ ịgwa ya na, n'akwụkwọ ozi edere na Ọktọba 15 wee nata na odeakwụkwọ UNWTO na 18 Ọktoba 2021, Gọọmentị Morocco gwara ya. Isi ụlọ ọrụ na mgbanwe ọnọdụ ụwa ugbu a metụtara ọrịa COVID-19 anaghị enye ohere maka nnọkọ nke 24 nke General Assembly na Marrakesh na 2021 na ụbọchị ekwenyero na 30 Nọvemba-3 Disemba n'ọnọdụ ndị ahụ na-ekwe nkwa ọnọdụ ahụike na nchekwa dị mkpa maka ndị sonyere.
Ndị odeakwụkwọ chọrọ icheta na nnọkọ nke iri abụọ na anọ nke ọgbakọ ọgbakọ ga -ezukọ na 24 dị ka ọgbakọ ọgbakọ kpebiri site na mkpebi 2021 (XXIII) na nnọkọ nke iri abụọ na atọ ya, dị ka edemede 727 nke ụkpụrụ na iwu 23 nke RUles of Procedure si dị. nke Nzukọ Ezumezu.
N'ikwekọ n'ikike ekenyela n'okpuru ntuziaka maka nhọpụta ebe a ga-anọ na nnọkọ ọgbakọ ọgbakọ nke ọgbakọ ọgbakọ nabatara site na mkpebi 631 (XX), na-eburu n'uche iji hụ na ọrụ nke nzukọ a na-eme maka biennium 2022-2023 na ịrụ ọrụ nke ọma nke akụkụ ahụ ya na -erube isi n'iwu, yana mgbe ya na onye isi oche nke ndị isi oche na gọọmentị nke Spain kwurịtara, odeakwụkwọ nwere obi ụtọ ịgwa na a ga -enwe nnọkọ 24 nke General Assembly na Madrid, Spain, isi ụlọ ọrụ nke nzukọ a, n'otu ụbọchị a gwara ndị otu niile, ya bụ 30 Nọvemba ruo 3 Disemba 2021. Isi okwu a ga -enye ndị otu niile ozi dị mkpa gbasara nnọkọ ahụ n'oge na -adịghị anya.
Isi ụlọ ọrụ nke World Tourism Organisation na -eji ohere a emegharị mba ndị otu mmesi obi ike nke oke nlebara anya.
Madrid, Ọktoba 23, 2021